Liverpool oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Sheffield United oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
(Sheffield) 28 Feb 2021. Liverpool ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane, kaddib markii ay kaga so adkaatay 0-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 48-aad kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 0-1 ka dhigay laacibkooda Curtis Jones.
65 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Liverpool ayaa la timid gool labaad, kaddib markii uu 0-2 ka dhigay xiddigooda reer Brazil ee Roberto Firmino, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Sadio Mane.
Ugu dambentii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 0-2 ay kaga soo adkaatay Liverpool kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane, Reds ayaa wali ku jirta booska 6-aad ee kala sareynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay uruursadeen 43 dhibcood.